Nhau - Zvakanakira kusimbiswa kweiyo ultrasonic
Zvakanakira kusimbisa kwe ultrasonic
Ultrasonic imwe yemhando yemuchina wave, iyo inoumbwa neyemagetsi magetsi system uye iyo ultrasonic vibration system. Iyo inodzosera simba remagetsi yeiyo yepamusoro frequency, yakakwira simba, iri kunze-kuiswa nesimba rekutyaira. Uye iwo akafananidzwa parameter pamwe neiyo yepakati chinhu ndicho chakakosha poindi yeiyo ultrasonic tekinoroji.
Dhijitari otomatiki frequency kupora ultrasonic jenareta → Transducer (Gadzira ultrasound wave) → Ultrasonic Horn (Enlarge ultrasonic) → Mold Musoro (Tumira ultrasound)
Uye zvayakanakira nezvayakaipira kugadzira muforoma chikamu chakakosha cheiyo ultrasonic, isu tinounza epamberi ichivharira analyzer, mold spectrum analyzer, kuburikidza neyakajeka kuyedzwa kwehuwandu hweforoma uye kuongorora kweforoma's wave neiyi michina. simba re ultrasonic.
YePurasitiki chubhu yekuisa mucherechedzo mapatani, ive nemhando dzakasiyana dzekuisa chisimbiso, zvinokurudzirwa zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana nevatengi.
Iine Ultrasonic yekuisa chisimbiso mukati mechisimbiso nzvimbo yehubhu inopisa neyakawandisa frequency kukweshera kunogadzirwa neiyo ultrasonic runyanga. Iyo chubhu inozo sunganidzwa ichipesana nechivharo uye inotonhodzwa kuita tube chubhu.
Ultrasonic chisimbiso haizokuvadze izvo zvinhu mukati nekuisa chisimbiso zvakanyanya kutsvinda uye kugadzikana. Kana iwe uchida yemhando yepamusoro uye yakagadzikana yekuisa chisimbiso mhedzisiro, ultrasonic yekuisa chisimbiso mhando inokurudzirwa zvakanyanya.
Kana iwe uine chubhu dzakasiyana, ultrasonic yekuisa mucheka muchina chete inofanirwa kushandura iyo inobata machubhu uye hapana chikonzero chekuchinja iyo preheating zvikamu, mutengo uye nguva inodiwa yakanyanya kushoma.
Zvichakadaro, sezvo chisimbiso che ultrasonic chiri chando chisimbiso, iwe haudi iyo indasitiri chiller kuti ushande nayo. Kuchengetedza zvese pasi pevhu uye magetsi bhiri.
Saka tinogamuchira kuti ubate HX Machine izvozvi, yako-yekumira yekupakata muchina mutengesi uye ngatibatsire iwe!
Post nguva: Aug-07-2020